कोरियाको सपना- मधुसुदन ओझाको बुझाइ - Kantipath.com
म जन्मेको देशमा परिवारको साथमै बसेर सपना पूरा गर्न सक्ने भए यति टाढाको देशमा आउने थिइन होला । जिवीकोपार्जनका लागि आफू बसोबास गरिरहेको ठाउँ छोडेर कोरियामा मजदुरी गरि जिउन बाध्य प्रवासी श्रमिक हुँ म ।
मजदुरी गर्ने क्रममा कुनै दुर्घटनामा नपरी स्वस्थ्य भई जिउने अधिकार छ मलाई । तर कोरियामा ठिक बिपरित ब्यबहार गरिन्छ म माथी । सेवा सुबिधा र हक अधिकार माथी कुठाराघात गरिएको छ भने मजदुरी गर्ने क्रममा रोजगारदाताको लापरबाही (काम गर्दा सुरक्षा सम्बन्धि आवश्यक उपकरणको कमी)का कारण अकालमै ज्यान गुमाउन र अंगभंग हुन विवश छु म ।
कोरियाली मजदुरले केही भएपनी मजदुर कानुनमा संरक्षण प्राप्त गरेको भए पनि मलाई कोरियामा मजदुरको दर्जाबाट कोषौं दुर दास बनाएर राखेको छ इपियसले । आफूमाथी भएको अन्यायकोलागि न्याय माग्न सम्बन्धित निकायमा जाने हो भने उल्टो पीडितको कुरालाई भन्दा पीडकको कुरालाई मात्र प्राथमिकता दिइन्छ ।
विभिन्न झुटा आरोपमा सजाय पनि दिइन्छ कोरियामा मलाई । विदेशी भएकै कारण कार्यस्थलमा आफू भन्दा सानो उमेरको कोरियनले समेत होच्याएर हेर्छ मलाई । मेरो दैनिकी कार्यस्थलमा धम्की, कुटपिट, गाली गलौज र दुर्व्यबहारको सामना गरेर सुरु हुन्छ ।
तर पनि म ट्वाइलेट, बाथरुम, पानी नभएको र ४० डिग्री तापक्रम भएको थोत्रो कन्टेनर जस्को एउटा कोठामा चारचार जनाको दरले लाखबढी भाडा तिरेर बस्न विवस छु ।
बर्षायाममा पानी भित्र पस्ने बोइलर बिनाको कोठाको लाखौं भाडा तिरेर बस्न बाध्य बनाइएको छ मलाई । काम गर्दै गर्दा कामको कारण वा अन्य कुनै कारण बिरामी भएपनि चुपचाप सहिबस्नु पर्छ । उपचार गर्न वा कामको कारणले भए कार्यस्थल परिवर्तन गर्न मिल्दैन । उल्टो काम गर्न मन नभए आफ्नो देश फिर्ता जान र होइन भने काम गर नभए गैरकानुनी बनाइदिन्छु भनि धम्की दिने गरिन्छ मलाई । कोरियामा महिला दिदीबहिनीलाई कानुनमै पुर्ण अधिकार भए पनि म माथी भने कार्यस्थलमा हातपात र अभद्र व्यबहार गरिदा समेत ठूलै प्रमाण जुटाउनु पर्ने हुन्छ मैले ।
कार्य स्थलमा धम्की, कुटपिट, गाली गलौज र अनेकन अभद्र व्यबहारको सामना गरिराखेको छु म ।
कोरियन नागरिकलाई ठेगना सोधेकै भरमा जेल जानु पर्छ मैले । तर कार्यस्थलमा म माथी कुटपिट, गाली गलौज, दुव्र्यवहार भैइरहँदा प्रमाणित गराउन गाह्रो हुन्छ । के म विदेशी भएकै कारण यसो भएको हो त ?
कोरियामा मैले विभिद धार्मिक, जातिय, वर्णिय विभेदको सामना गर्नु परेको छ । मैले कोरियाको सार्वजनिक स्थानया सार्वजनिक यातायातका साधन प्रयोग गर्दा मलाई फरक दृस्टिकोणबाट हेर्ने गरिन्छ । म पनि अरु जस्तै मानिस अनि मजदुर हो ।
म स्वयमले मेरो अधिकारको बारेमा आवाज उठाइन भने अरु कसैले मेरो अधिकारको निम्ति आवाज उठाउने वाला छैन । चुपलागेर बसेमा मेरो अधिकार प्राप्त हुनेवाला छैन । त्यसकारण मेरो अनि तपाईं हामी सबै प्रवासी मजदुरको हक अधिकारका निम्ति, आफू खुशी कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने नियम सहितको डब्लुपियस(WPS)का लागि र प्रवासी मजदुर माथी गरिने विभिन्न भेदभाव अन्तका लागि दवाव शृजना गरौं ।
Previous Previous post: विप्लवले गरे पत्रकार प्रकाश डुम्रे र हिम बिष्टलाई कारवाही, फेरी अर्को खुलासा !
Next Next post: यस कारण विवादमा पर्छ प्रहरीको व्यवहार ?